Polpettone miaraka amin'ny garnish tongolo | ThermoRecipes
Polpettone miaraka amin'ny garnish tongolo
Carnes60 minitraOlona 4460 kaloria
Amin'ny hena italiana dia lazaina hoe polpetta. Azo antoka fa hanome hevitra anao ny dikan'izany Meatloaf.
Toy ny henan-kena goavambe vita amin'ny nitsitsy. Amin'ity tranga ity dia misy aubergine ihany koa, mofo kely, persily, tongolo gasy ... manana izany rehetra izany ianao amin'ny horonan-tsary ary ao anatin'ireo akora hita etsy ambany.
Raha ny hena etona hanomana garnish tongolo tsotra isika. Tsy tianao loatra ity safidy ity? Eny, soloy a ketchup. Ho hitanao ato amin'ity rohy ity ny fomba hanomanana azy rehefa mahandro ny polpettone.
1 Polpettone miaraka amin'ny garnish tongolo
Ny Polpettone dia be ranony noho ny hena hena ary haingana kokoa ny fanomanana. Tian’ny ankizy koa izany.
25 g ny fromazy Parmesan amin'ny sombintsombiny
100 g ny mofo koba manontolo, ny crumb
Manodidina ny 15 g ny persily vaovao
Tongolo gasy tongolo 1/2
200 g an'ny aubergine amin'ny sombin-javatra
Dipoavatra mainty nototoina
400 g ny hena voatoto (mifangaro, hen'omby ary henan-kisoa)
Tongolo 450 g amin'ny takelaka
250 na 300 g ny ron-kena
2 sotrokely ranon-crème ho an'ny fandrahoan-tsakafo
Apetraho ao anaty vera ny Parmesan, ny mofo, ny persily, ny aubergine, ny tongolo lay, ny sira ary ny dipoavatra. Izahay dia programa 10 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Manampy ny atody sy ny hena voatoto izahay. Programa izahay 20 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Mametraka taratasy tsy misy menaka eo amin'ny latabatra izahay ary mametraka ny hena eo amboniny. Manangona horonana izahay.
Nofonosinay tsara tamin'ny taratasy fanaova izany ary apetraka eo amin'ny lovia Varoma ny horonana. Mamandrika azy izahay.
Ao anaty vera madio no mametraka ny menaka oliva sy ny tongolo. Programa izahay 5 minitra, 120º, fihodinana havia, hafainganana 3.
Ampio ny ron-kena, apetraho eo amin'ny toerany ny Varoma, miaraka amin'ny sarony, ary ny programa 30 minitra, maripana Varoma, fihodinana ankavia, hafainganam-pandeha 1.
Esory amim-pitandremana ny Varoma isika ary mitahiry izany.
Mametraka ny crème ao anaty vera izahay ary mifangaro amin'ny programa 15 segondra, fihodinana havia, hafainganam-pandeha 3.
Arosoy miaraka amin'ny garnish tongolo ny hena.
Fanazavana fanampiny - Sakafo miaraka amin'ny voatabia maina sy saosy voatabia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Polpettone miaraka amin'ny garnish tongolo
Lasopy akoho manitra sokay